CAJIIB: JUPITER MA KU SHAQAYNAYO Qorraxda!
Inicio/Ciencia/Meeraha Jupiter kuma wareegto qorraxdayada
0 2.269 1 daqiiqo akhri
Waxaa la ogaaday in, dhab ahaan, xarunteeda cuf isjiidadka aysan qorraxda jiifin.
Rafaa ee nidaamkeenna qorraxda waxaa arkay dayax gacmeedka, the Baadhitaanka Juno, kaas oo la bilaabay 2011 kii NASA Sannadkii 2016-ka, baadhitaankan ayaa dhawaan ka gudbay meeraha gaaska leh oo wuxuu ku guuleystay inuu sawirro ka qaado. Ujeeddada baaristu waxay ahayd in la barto gudaha gudaha dahsoon ee meeraha iyadoo gacan laga helayo hirarka magnetka, hirarka raadiyaha iyo aagga cuf isjiidadka leh ee meeraha laftiisa.
Markii baaritaanka lagu guuleystay in la soo qaado sawirro, cilmi baarayaashu waxay la yaabeen sida cajiibka ah ee uu meeraha u ahaa. Sawiradu waxay bixiyeen xogta lagama maarmaanka ah si taas loo ogaado Jupiter waxay ahayd mid aad u weyn oo aan suuragal u noqon karin qorraxdeena.
Waxay ogaadeen in Jupiter uusan ku wareegin Qorraxda.
Markay shey yar yari wareegto, shay aad u baaxad weyn oo booska ah, qasab ma aha inuu ku socdaalo qaab wareegsan shayga weyn. Taabadalkeed, labada shay waxay ku wareegaan bartamaha cuf isjiidashada, oo macnaheedu yahay meeraha Jupiter kuma wareegto qorraxda.
Xarunta cuf-jiidashada ee u dhexeysa qorraxda iyo gaaska weyn waxay ku nooshahay meel bannaan oo ka durugsan dusha xiddiga. Meeraha JupiterSida laga soo xigtay NASA, waxay leedahay cabbir weyn, oo ku taal bartamaheeda 7% gacan ka mid ah xiddigta weyn.
Isla sharcigani wuxuu khuseeyaa markii, tusaale ahaan, Saldhigga Hawada Caalamiga ah wuxuu ku wareegaa Dunida. Dhulka iyo idaacaddu waxay ku wareegaan xaruntooda cuf isjiid jiid ahaan, laakiin xarunta cuf isjiidadka ayaa aad ugu dhow bartamaha Dunida oo ay adag tahay in la helo jaleecada hore. Tani waxay ka dhigeysaa idaacaddu inay umuuqato inay wareegeyso meertada meeraha.
Jupiter Balac ahaan waa qiyaastii 143.000 oo kilomitir waxayna khubaradu sheegeen inay aad u balaaran tahay ayna liqi karto dhulkeena oo kaliya, laakiin inta kale ee nidaamka qoraxda.
Mobilada ugu fiican 2019
cufnaanta Jupiter jupiter qorraxda kuma meerto Jupiter Planet Baadhitaanka Juno
Muxuu Samsung noo keenayaa S11, iyo kaamirooyin fara badan?